ChaCha + iPhone: Nyevero, Geography, Mhinduro, Kugovana | Martech Zone
Muvhuro, April 25, 2011 Mugovera, October 29, 2011 Douglas Karr
Ini ndichangobva kurodha pasi ndobva ndatanga kutamba neChaCha yakagadziridzwa iPhone Chikumbiro. Ndiri kufadzwa ... iko kushandiswa kuri nyore uye maficha akasimba. Iyo yekutanga ChaCha iPhone app yakashandiswa kungo pusha mhinduro kubva kudhatabhesi kuburikidza neiyo iPhone app kudzokera kumushandisi Ichi chishandiso iri nhanho kumusoro - uye ine zvishamiso zvishoma.
Sezvakaita ne ChaCha saiti, chero mibvunzo isina kupindurwa inosundirwa kudziva rekutungamira kwe rarama mhinduro.
ChaCha agara achichengeta jogirafi nemibvunzo yayo asi handina kumbobvira ndawana iyo data. Iine dhatabhesi irisundira mamirioni ekupindura pazuva, iyoyo imin'a yegoridhe yeruzivo. Sekutaura kwaScott muvhidhiyo yake maererano neapp - zvakanyanyisa kupindwa muropa kuti uone mibvunzo iri kubvunzwa nevamwe yakakukomberedza.
Iwe unogona zvino wedzera zviyeuchidzo! Une musoro wenyaya wekufarira? Tora mhedzisiro isundirwe kwauri. Ndine chokwadi kuti mwanasikana wangu achave Justin Bieber Mibvunzo gadzirira pasina nguva.
Kugovana mubvunzo ikozvino inogoneka kuburikidza neemail, SMS uye Facebook!
Mibvunzo inoenderana zviri nyore kutarisa!
Zvakanaka kuona timu yaScott ichibuda ichitungamira iine mamwe mazano matsva - uye yakanyatso rongedzwa zvine mutsindo muchishandiswa chakapfupika. Tichifunga iyo Google Panda debacle, danho iri rinowedzera kusangana nevateveri vaChaCha vanoparadza. Kubva pakuona kwekushambadzira, ini ndinoda kuti zvese zvinokurudzira kubhurawuza kwakawanda (ne Pedyo neni chimiro) uye inovaka mune yekurera chinhu kuti vashandisi vadzoke (ne Alerts).
Makorokoto ChaCha timu! Tsvaga uye utore iyo nyowani ChaCha iPhone app pane yako iPhone. Ndinovimba pane iyo iPad vhezheni iri kuuya - izvi zvakangonaka kwazvo!